ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် လျာထားချက်ထက် ဘီလီယံ ၂၄ဝ ကျော် လျော့နည်းခဲ့သည့် အကြောင်းပြချက် ပျောက?? - Yangon Media Group
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် လျာထားချက်ထက် ဘီလီယံ ၂၄ဝ ကျော် လျော့နည်းခဲ့သည့် အကြောင်းပြချက် ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်နေဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦး တင်နိုင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်၊ နေပြည် တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယ ၆ လပတ် အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုအခြေအနေနှင့် ယင်းအပေါ် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာတွင် ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်နိုင်ထွန်းက အထက်ပါအ တိုင်းပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
”လျာထားချက်အောက် လျော့နည်းကောက်ခံနိုင်မှု ပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုလ်စွဲခဲ့သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် လျော့နည်းကောက်ခံ ရရှိ မှုအကြောင်းအရင်းတွေကို ရှာ ကြည့်သည့်အခါ MIC ခွင့်ပြုချက် နှင့် ကုမ္ပဏီ ၄ဝဝ နီးပါးကို အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကျပ် ၁၂၅ ဘီလီယံရှိပြီး၊ ကျန်ခေါင်းစဉ် လေးမျိုးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည် က ကျပ် ၃၅ ဘီလီယံခန့်နှင့် စုစု ပေါင်း ပမာဏငွေကျပ် ဘီလီယံ ၁၆ဝ ခန့်သာ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ စုစုပေါင်း လျော့ နည်းသည်က ကျပ်ဘီလီယံ ၄ဝဝ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်သဖြင့် လျော့ရသည့် ကျပ် ဘီလီယံ ၁၆ဝ ရှိသည့်အတွက် ကျန်သော ကျပ် ဘီလီယံ ၂၄ဝ ကျော် ဘယ်ရောက် သွားသလဲဆိုသည့် ဖြေရှင်းချက်ကို တော့ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ (၁၁/၂ဝ၁၈)တွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိ၍ ပျောက်ခြင်း မလှပျောက်နေပါတယ်။ လျာထား ချက်ဆိုတာ မျှော်မှန်းတာဖြစ်လို့ လျော့နည်းကောက်ခံရရှိတဲ့ အ ကြောင်းအရင်းကို ပြည်တွင်းအ ခွန်များ ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အစီ ရင်ခံစာတွင် ခိုင်လုံသောဖြေရှင်း ချက်ပေးရန်အထူးလိုအပ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
တာဝန်ခံယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုမရှိလျင် တိုင်းပြည်၏ ဘတ်ဂျက်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နှင့် ထိထိ ရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်မ ဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ” MIC ခွင့်ပြုချက်နှင့် ကုမ္ပဏီတွေကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေး တယ်ဆိုတာကလည်း ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ယင်း ကိစ္စကို ၆ လပတ်ကို ကြိုတင်လျာထားစဉ်က မသိခဲ့ဘူးလား။ ကိုယ့်ဌာန ကလျာထားစရာရှိတာ လျာထားတယ်။ သူ့ဌာနကလည်း ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးစရာရှိတာပေးတယ်။ အစီရင်ခံစာတင်ရတော့မယ်ဆို တော့မှ ကျွန်တော်တို့ ဌာနကလျာ ထားတာကို သူတို့ဌာနက ကင်း လွတ်ခွင့်ပေးလိုက်လို့ထင် သ လောက်မရခဲ့ဘူးဆိုရင် အစိုးရ ဦး စီးဌာနအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ညှိ နှိုင်းမှုမရှိခဲ့တာလား။ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းစရာမလိုအပ်တာလား၊ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်း တာ လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါ တယ်”ဟု ¤င်းက ဆက်လက်ပြော သည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ (ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲ)၌ အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူ ၁ဝ ဦးတွင် ဧရာဝတီတိုင??